DAWWO SAWIRRO: Banaanbax Roob Tuug ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho !! | kowtharmedia.com
Home WARAR DAWWO SAWIRRO: Banaanbax Roob Tuug ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho !!
DAWWO SAWIRRO: Banaanbax Roob Tuug ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho !!
Nov 14, 2016WARAR
Banaanbax Roob doon ah oo Alle looga baryayay in uu Ummadda Soomaliyeed ka dulqaado abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa ka qeyb galay banaanbaxan Mas’uuliyiin ka socotay Wasaaarada diinta Awqaafta, Hay’adda Culimada Soomaaliyeed iyo Qeybaha Bulshada Culuma-udiin, haween, dhallinyaro iyo ardayda dugsiyada Qur’aanka qaarkood.
Dadka isu soo baxay ayaa Salaad Alla Bari ah ku tukaday Masjidka isbaheysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho. waxaana salaada ka dib loo duceeyay dhammaan Ummadda Soomaliyeed inuu Alle ka dulqaado abaaraha iyo colaadaha.
Agaasimaha wasaarada awqaafta iyo arrimaha diinta Shiikh Cali Max’uud (Cali Dheere) ayaa ugu baaqay shacabka iney joogteeyaan dibad-baxyada Alla bariga ah ayna Ilaahay u towbad keenaan si uu uga dulqaado abaaraha iyo dhibaatooyinka kale.
Gobolada dalka qaarkood ayaa ayaa waxaa ka jira abaaro saameeyey dadka iyo duunyada, waxaana socda gurmadyo lagu caawinayo dad tabaaleysan wallow wali ay jiraan dad xoololey ah oo aan gaarin kaalmo bini aadinimo kadibna ay ka dhidhiteen caruur iyo Xoolaha ladhaqdo.
Previous PostDaawo Muuqaal: Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi oo sheegay inay ka qeyb galayaan doorashooyinka dadban!! Next PostDowladda Itoobiya oo ka baxeysa Howlgalka AMISOM Akhriso warbixin kooban!!